Archive du 20200428
Mitombo ny "Cas Contact" Nisy voan'ny Coronavirus teny Itaosy sy 67 Ha
Olona vaovao miisa 4 no voamarina fa tratry ny coronavirus tamin’ireo fitiliana 146 vita teo anelanelan’ny tamin’ny alahady atoandro sy omaly alatsinainy 27 aprily tamin’ny 12ora atoandro,
Baolina kitra any Italia Hanomboka amin’ny 18 mey izao ny fanazaran-tena iombonana
Nambaran’ny praiministra Italiana, Giuseppe Conte, tamin’ny alahady 28 aprily 2020 teo fa afaka manao fanazaran-tena iombonana amin’izay ireo kliobana
Fiara fitateram-bahoaka Mbola misy ireo tsy manara-dalàna
Mazava ny toromarika nomen` ny fitondram-panjakana manoloana ireo fiara fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra: tsy maintsy manao aro-tava ny mpandeha sy ny mpamily.
Moto Mahazo manao taingin-droa amin'izay
Anisan` ny fepetra nananosarotra ireo mpampiasa lalana indrindra ireo mpitondra moto ny tsy fanaovana taingin-droa.
Mponin’Ambohipo Tsy manaiky ny fanesorana ireo mpitantana ny fokontany
Nitokona nanoloana ny biraom-pokontanin’Ambohipo omaly ireo mponina tsy manaiky ny fanalana ireo tompon'andraikitra eo anivon’ity birao ity.
Fiaraha monina ambany tanàna Tsy manaja ny fitondrana arotava
Atahorana mafy ny fifindran'ny tsimokaretina covid-19 eny amin ny faritra ambany tanàna. Raha ny resaka ataon' ireo mponina eny dia tsy matahotra izy ireo ary tsy mitondra arotava.
Ora fiasana noferana Mampikolay orinasa maro
Nanomboka ny 21 martsa no niditra tamin’ny fihibohana isika noho ny fahatafidiran’ny coronavirus.
Antananarivo sy Fianarantsoa Miisa 588 ireo namafa lalana
Nanomboka omaly alatsinainy maraina 27 aprily ny fampiharana ny dingana fanasaziana ho an’ireo izay minia tsy manao aron-tava ho fiarovana amin’ny fiparitahan’ny COVID 19.
Mieli-patrana ny Coronavirus Aiza ny fitiliana 1000 isan’andro nampanantenaina?
Fampanantenan’ny Filoham-pirenena ny hamelona sy hanokatra ireo laboaratoara maro eto amin’ny firenena, ka olona 1000 isan’andro no hatao fitiliana noho ny fisian’ny coronavirus.
Tsy manao arotava Mahazo sazy henjana kokoa ireo be famaliana
Tsy hisy indrafo ny fampiharana ny lalàna ho an’ireo tsy manao ny arotava, izay nanomboka omaly ny fanasaziana ireo izay tratra tsy manao izany.
AIRTEL Nanome fanampiana hitsinjovana ny sahirana
Sahirana avokoa ny ankamaroan’ny isan-tokantrano amin’izao fihibohana ateraky ny fiparitahan’ny tsimok’aretina COVID 19 eto amintsika izao.
Association Mitia-Soa Nizara fanampiana sy arotava teny Ambohimanambola
Nahazo alalana tamin’ny ben’ny tanàna am-perinasan’ny kaominina ambanivohitra Ambohimanambola ny “Association Mitia-Soa” tarihan’ny filoha mpanorina,
Lalatiana Andriatongarivo Miaro mafy ny tambavy CVO
Mitohy hatrany ny fizarana maimaim-poana ny tambavy Covid Organics (CVO) eto an-drenivohitra sy faritra maro hafa ihany koa.
Madagasikara sy Kaomoro Manamafy ny fifandraisana hiatrehana ny Covid-19
Nifandray an-telefaonina ny minisitry ny raharaham-bahiny Kaomorianina, SOUEF Mohamed El-Amine sy ny ministry ny raharaham-bahiny, Tehindrazanarivelo Djacoba,